Diyo post :: चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी छुट्कारा पाउनुहोस्
चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी छुट्कारा पाउनुहोस् - Diyo post
एजेन्सी २८ जेठ । कपालमा प्रशस्त मात्रामा स्याम्पुको प्रयोग नभएमा वा तनाब, मौसम परिवर्तन लगायतका कारण कपालमा चाया पने गर्दछ । चाँयाले हरेक उमेर समुहका मानिसलाई दुःख दिइरहेको छ । गर्मी समय होस् या जाडो मौसम चाँयाको समस्याले सताइरहेको हुन्छ । यसले कपाललाई मात्रै होईन डन्डिफोर लगायतका समस्याले अनुहारमा समेत असर गर्छ ।
चायाँ हटाउने १० घरेलु उपाय यस्तो छ ।
चाँयासँग लड्नको लागि बेकिङ सोडाले ठूलो मदत गर्दछ । यसका लागी एक चम्चा बेकिङ सोडा लिनुहोस् र भिजेको कपालमा विस्तारै मसाज गर्नुहोस् । र, केही मिनेटपछि नुहाउनुहोस् । यसरी एक हप्तामा चार पटक गर्नुभयो भने चाँया हट्नलाई ठूलो मद्दत गर्नेछ ।
थोरै दहीले कपालमा मसाज गर्नुहोस् । मसाजपछि ३ देखि ४ घण्टा सम्म खुला छोड्नुस् । र, स्याम्पुले पखाल्नुस् । दहीले चायाँ हटाउने मात्र नभई हेयर कन्डिस्नरको समेत काम गर्दछ ।
हिना वा मेहेन्दीँ कपालको समस्या समाधानको लागि पहिल्यै देखि प्रयोग गरिँदै आएको छ । हिना, चियाको लेदो र कागतीको रस तातो पानीमा मिसाएर ८÷१० घण्टा यत्तिकै छोडिदिनुस् । र यसलाई कपालमा लगाएको १÷२ घण्टाभित्र हल्का स्याम्पुले पखाल्नुहोस । यो प्रक्रिया हप्तामा दोहोर्याएर गर्नाले चाँया पुर्ण रुपमा हटेर जान्छ ।
सुन्तलामा पाईने अमिलो तथा भिटामिन सीेले छालाको समस्यालाई मद्दत पुर्याउँदछ । तर सुन्तलाको बोक्रा समेत कपालको लागि राम्रो फाईदा गर्दछ । यसको बोक्राको पेस्ट बनाएर हप्तामा २÷३ पटकसम्म लगाउनाले चाँयाले बाईबाई गरेको थाहा पाउन सकिन्छ ।
त्यसैले आफ्नो भान्सामा उपलब्ध भएका यी सामानहरुको प्रयोग गर्नुहोस् र जतिसक्दो चाँडो चाँयाबाट छुटकारा पाउनुहोस् ।
स्रोत : हेयर केयर